I-China ekhawulezayo ukubambela kwizibulala-zinambuzane Iiprothrin abavelisi kunye nabathengisi Senton
CAS Hayi.: 72963-72-5
Igama lemveliso Imiprothrin
CAS Hayi. 72963-72-5
Ifomula yemichiza C17H22N2O4
Ubunzima beMolar 318.37 g · mol − 1
Ukuxinana 0.979 g / ml
Indawo yokubilisa 375.6 ℃
Ukusebenza ngokukhawuleza Izinambuzane Izinto eziphathekayo Imiprothrin ivelisa kakhulu knockdow ngokukhawulezan amandla okulwa nezinambuzane zasekhaya, nge amaphela achaphazeleka kakhulu. Imiprothrin ilawula izinambuzane ngomsebenzi wokudibana kunye netyhefu esiswini. Isebenza ngokukhubaza iinkqubo zemithambo-luvo zezinambuzane. Ukusebenza ngokuchasene nenambuzane ebanzi, kubandakanya iRoaches, iWaterbugs, iimbovane, iSilverfish, iiCricket kunye neziGcawu.
Imiprothrin inokusetyenziselwa i ulawulo lwezinambuzane kwi Ukusetyenziswa kwangaphakathi, okungekuko ukutya (amakhaya okuhlala, iindawo ekungatyiwa kuzo kwiivenkile zokutyela, izikolo, iindawo zokugcina, iihotele).
Ubunzima beMolar 318.37 g · mol−1
IipropatiImveliso yobuchwephesha yifayile ye- ulwelo olunombala omthubi otyheli. Ingenakunyibilika emanzini, inyibilike kwisinyibilikisi esinjenge-acetone, i-xylene kunye ne-methanol. Inokuhlala ilungile iminyaka emi-2 kubushushu obuqhelekileyo.
Ubungozi: I-LD yomlomo50 ukuya kwiigundane 1800mg / kg
Ukusetyenziswa: Isetyenziselwa ukulawula amaphela, iimbovane, iintlanzi zesilivere, iikhilikithi kunye nezigcawu njlnjl Iziphumo ezinamandla zokunkqonkqoza kumaphela.
I-HEBEI SENTON yinkampani yorhwebo yamanye amazwe eShijiazhuang, China. Amashishini amakhulu abandakanya iAgrochemicals,API& Abaphakathi kunye neekhemikhali ezisisiseko. Ukuthembela kwiqabane lethu lexesha elide kunye neqela lethu, sizimisele ukubonelela ngeyona mveliso ifanelekileyo kunye neenkonzo ezilungileyo zokuhlangabezana neemfuno zabathengi eziguqukayo.Ngelixa sisebenza le mveliso, inkampani yethu isasebenza kwezinye iimveliso, njenge LezeMpilo, Amayeza ezempilo, UDinotefuran, Umbulali weengcongconi, Ukutshiza izinambuzane kwaye njalo njalo.
Iikhathalo zomkhiqizo: Imiprothrin> Ngaba ufuna into ebambekayo ekhawulezayo yokubulala izinambuzane? Sinokhetho olubanzi kumaxabiso amahle ukukunceda ufumane ubuchule bokuyila. Lonke uhlaselo lwempepho kuqiniswe kumgangatho. Siyi-China iMveliso yokuLawulwa kweZinambuzane eziBulala iiKhemikhali. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
I-Synthetic Pyrethroid Insecticide yeCyphenothrin
Amayeza oMgangatho oPhakamileyo kunye nePermethrin yokubulala izinambuzane
I-Permethrin engenabungozi iphathwe ngeempahla
I-Agrochemical Insecticide Pesticide Cyromazine